Uhlelo olukhulu lokugoma abantu abaningi emlandweni seluqalile | Scrolla Izindaba
Uhlelo olukhulu lokugoma abantu abaningi emlandweni seluqalile
NgoLwesithathu abe-Covax bahambise umjovo wokugoma wokuqala we-Covid-19 e-Ghana.
Lolu hlelo lomhlaba wonke luhlela ukusabalalisa imithamo engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezimbili zomuthi wokugoma emazweni angama-92 kulo nyaka, okusho ukuthi izikhulu zizokwenza kube umsebenzi wokugoma omkhulu kunayo yonke emlandweni.
Ukuthunyelwa kwemithamo eyi-600,000 kulethwe enhlokodolobha i-Accra kuqala ngoba ucwaningo luveza ukuthi ukusabalala kwegciwane eNtshonalanga ye-Afrika kubanzi kakhulu kunalokho izinombolo ezisemthethweni ezikuvezayo.
Ngokocwaningo lwamuva nje, okungenani umuntu oyedwa kwabahlanu e-Lagos, e-Nigeria, ubengayithola i-coronavirus ngoMfumfu nyakenye. Imiphumela efanayo itholakele e-Accra.
I-Covax, ezohlinzeka ngemithi yokugoma emazweni anemali encane engenayo, izosebenza ngokumelene namazwe acebile “imithi yokugoma emazweni” futhi yenze ukusatshalaliswa kube kuhle.
Kodwa-ke, ukuthengwa kwamijovo emazweni acebile kwenza ibe mncane imizamo ye-Covax.
I-New York Times ibika ukuthi ngesikhathi abantu baseMelika abayizigidi ezingama-44.5 sebethole umjovo, kusukela ngesonto eledlule amazwe angaphezu kwe-130 bekusamele agome umuntu oyedwa.
Ngisho nokuthunyelwa kwe-Covax e-Ghana kuhlanganisa inani elingaphansi kwephesenti elilodwa labantu.
Futhi ngasekupheleni kowe-2021 bazobe sebenikwe imijovo eyanele ukugoma amaphesenti angama-20 wabantu bayo abayizigidi ezingama-30, ngakho-ke kuzofanele ithenge ngaphezulu.
UNobhala-jikelele weZizwe Ezihlangene, u-António Guterres, uthe ngesonto eledlule le ukusatshalaliswa komgomo “bekungalingani futhi kungenabulungiswa.”
Wengeze ngokuthi ubhubhane ngeke luphele kuze kube yilapho wonke umuntu egonyiwe.
“Lokhu akusilona udaba lokuphana,” kusho uGuterres.
Akwanele emazweni acebile ukuhlinzeka ngemithi yokugoma eyenele kubantu babo. Kumele baqinise iminikelo yabo ku-Covax uma ubhubhane luzophela.
Umthombo wesithombe: @WHOAFRO